China Soft PVC Keychains umzi-mveliso kunye nabavelisi | SJJ
Singumthengisi ochwepheshile wezinto zentsimbi zesikhumbuzo, iibheji zelapel kunye neebheji, iimbasa, iingqekembe zemali, amakhonkco, iibheji zamapolisa, iibheji ezihonjisiweyo & ezilukiweyo, intambo, izincedisi zefowuni, iikepusi, izinto zokubhala kunye nezinye izinto zentengiso.
Enkosi kwinkxaso yeefektri ezinendawo yokuvelisa ngaphezulu kwe-64,000 yeemitha zesikwere kunye nabasebenzi abangaphezu kwama-2500 abanamava kunye neplanti yamva nje yokucoca i-electroplating kunye noomatshini abathambileyo bokuhambisa umbala we-enamel, siyabodlula abo sikhuphisana nabo ngokusebenza okuphezulu, ingcali, ukunyaniseka kunye nomgangatho wemveliso ogqwesileyo, ngakumbi inani elikhulu elifunekayo kungekudala okanye uyilo oluntsonkothileyo olufuna abasebenzi abanamava. Uzinikele kulawulo olungqongqo lomgangatho kunye nenkonzo yabathengi ecingayo, abasebenzi bethu abanamava bahlala bekhona ukuze baxoxe ngeemfuno zakho kwaye baqinisekise ukwaneliseka okupheleleyo kwabathengi.
Izitshixo ezithambileyo zePVC zithandwa kwihlabathi liphela. Abasebenzisi ngabantu abadala kunye nabantwana. Iimveliso zinokubonelelwa ngexesha elifutshane kunye nomgangatho ophezulu kunye namaxabiso afanelekileyo kuzo zonke iintlobo zezihlandlo apho abantu bafuna ukubonisa iilogo okanye iingcamango zabo ngezinto ezincinci zekhonkco.
Izitshixo ezithambileyo zePVC zithandwa kwihlabathi liphela. Abasebenzisi ngabantu abadala kunye nabantwana. Iimveliso zinokubonelelwa ngexesha elifutshane kunye nomgangatho ophezulu kunye namaxabiso afanelekileyo kuzo zonke iintlobo zezihlandlo apho abantu bafuna ukubonisa iilogo okanye iingcamango zabo ngezinto ezincinci zekhonkco. Ingasetyenziswa kuzo zonke iintlobo zezihlandlo, kwiimpawu ezidumileyo, izinto zokuthengisa, ezemidlalo, ezolonwabo, imfundo kunye njl njl. imigangatho yovavanyo. Inxalenye ethambileyo yePVC inokwenziwa kuzo zonke iintlobo zeemilo kunye nobukhulu ngokwezicelo zabathengi. Yonke imibala yePantone iyafumaneka, imibala emininzi inokufezekiswa kwinto enye, kwaye iinkcukacha zinokuboniswa ngokoyilo lwakho ngokunjalo. Uphawu lwe-Softness luya kukhusela iinkcukacha kwaye luphephe imikrwelo, luphephe ukulimaza umzimba kunye nezinye izinto.
Izinto: PVC ethambileyo
Ii-Motifs: Die Wabetha kwi-2D okanye kwi-3D kumacala angatshatanga okanye amabini
Imibala: Yonke imibala yePantone iyafumaneka, imibala emininzi kwinto enye
Iinketho zokuqhotyoshelwa okuqhelekileyo: Umsesane wokutsiba, umsesane ongundoqo, izixhumanisi zentsimbi, iintambo, iintambo zeBhola kunye njl.
Ukupakisha: 1pc/polybag, okanye ngokwesicelo somthengi
MOQ: 100 iipcs
Okulandelayo: Soft PVC Key Covers
China Ababoneleli beThanos Keychain abagqwesileyo
ETshayina Ezona Quotes zamakhonkco ezitshixo ezibalaseleyo
China Metal Keychain kunye PVC Keychain ixabiso
Keychains zeLogo eSiko
Izitshixo zeRubber yesiko
Incwadi yokulinganisa ikhuselekile
Izikhonkwane Zokuprinta zeSilkscreen
Isitampu Ngaphandle Kwezikhonkwane Zombala
Imipu emincinci yamaqhosha eqhosha kunye ne-AWM Keychain
Iitsheyini ezingundoqo zeSakhelo seFoto